Abaanduulaha Ciidamada Maamulka HirShabelle oo Isku day dil Ka Badbaaday.
Monday August 06, 2018 - 14:18:16 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax uu ka badbaaday sarkaal sare oo katirsan melleteriga dowladda Federaalka.
sawir hore qarax gaari lagu xiray
Qaraxaani ayaa shalay waxa uu ka dhacay gudaha Warshadii hore ee dharka ee ku taalla degmada Balcad, halkaasi oo ku sugnayeen maleeshiyaad ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya iyadoona weerakaasi uu ka dhashay khasaaro soo gaaray askar iyo saraakiil.
Qaraxa waxaa ka badbaaday abaanduulaha ciidamada maamulka isku magacaabay Hirshabeelle Ninka lagu magacaabo Col. Cali Cariif, kadib markii qaraxu uu gaarigiisa qabsaday.
Inta la xaqiijiyay 7 askari ayaa ku dhaawacantay Qaraxaasi, dadka ku dhaawacmay Qaraxa waxaa ka mid ahaa taliyaha maleeshiyaadka garoonka Diyaaradaha magaalada Jowhar, kaasi lagu soo waramayo in dhaawac aad uculus uu soo gaaray .
Qaraxii shalay ka dhacay degmada Balcad ayaa imaanaya, xili habeenadii la soo dhaafay xoogaga Al Shabaab ay weerarro loo adeegsaday madaafiic ay ku qaadeen Saldhigyo maleeshiyaadka dowladda iyo Ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin degmada Balcad .
Duqeymahaasi ayaa lagu garaacay saldhigga ciidamada dowladda ee dhismaha Warshadii hore ee Dharka degmada Balcad iyo xero diris la ah Dhismahaasi oo fariisin u ah ciidamada Burundi ee qeybta ka ah soo duulayaasha AMISOM ee Sh/dhexe ku sugan.